हरेक देशमा कोका कोला तर तीन? होइन!
यो कल सूचित गरिएको थियो कि कोकालाले यसको उत्पादन म्यांमारमा ल्याउने योजना बनाएको छ, जस्तै नै संयुक्त राज्य सरकारले कम्पनीलाई त्यसो गर्न अनुमति दिन्छ। म्यांमार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बीचको कुराकानी पछि विद्यमान भएको छ र म्यांमारमा अमेरिकी लगानी चाँडै अनुमतिको लागी सम्भव छ।
भौगोलिक दृष्टिकोणको लेखको सबै भन्दा रोचक दाबी थियो कि म्यांमारको अलावा, त्यहाँ दुई अन्य देशहरू छन् जहाँ कोका कोला सेवा छैन - उत्तर कोरिया र क्यूबा।
कोका-कोलाको वेबसाइटले दावी कोला "200 भन्दा बढी देशहरूमा उपलब्ध छ" भन्ने दाबी गर्दछ तर वास्तवमा त्यहाँ मात्र 196 स्वतन्त्र देशहरू छन् । कोका-कोला सूचीमा हेर्दै देखाउँछ कि धेरै वास्तविक देशहरू हराइरहेको छ (जस्तै पूर्वी तिमोर, कोसोवो, वेटिकन सिटी, सान मारिनो, सोमालिया, सुडान, दक्षिण सुडान, आदि; तपाईं तस्वीर पाउनुहुन्छ)। यसैले, कोकाला केवल म्यांमार, क्युबा मा उपस्थित छैन भनेर आश्वासन र उत्तर कोरिया एक पुरा तरिकाले गलत छ। लेख अनुसार रायटर यो "तथ्य" को स्रोत हो।
यसबाहेक, कोका कोला वेबसाइट सूचीमा हेर्दै, यो स्पष्ट छ कि "दर्जनौं भन्दा बढी सूचीबद्ध सूचीहरू सबै देशहरू (जस्तै फ्रांसीसी गुयाना, न्यू क्यालेडोनिया, पुर्टो रिको, यूएस भर्जिन टापु, आदि) होइनन्। यसैले कोका कोला व्यापक रूपमा वितरित गरिन्छ, त्यहाँ केही स्वतन्त्र देशहरू जहाँ पेय उपलब्ध छैन। यद्यपि, कोकाला को ग्रह मा सबै भन्दा व्यापक वितरित अमेरिकी उत्पादन बनी रहयो छ, यहां सम्म कि मैकडोनाल्ड र सबवे रेस्टुरेन्टहरु लाई पनि अधिक ।
(छवि: उत्तरी कोरियाको झण्डा, जहाँ कोक निश्चित रूपमा उपलब्ध छैन।)
मानसिक मानचित्र के हो?
5 तपाईले निजी विद्यालयलाई किन विचार गर्नुपर्छ?
श्रम बल सहभागिता के हो?
ला भिसा ले 10 देखि अधिक शुल्क (क्रूज स्थानीय ओ बीसीसी को लागि)
Dizzy Gillespie को प्रोफाइल
शीर्ष डेटिंग र मसीही किशोरहरूको लागि सम्बन्ध सल्लाह पुस्तक
साइन्सोलोजी लागत कति कति हुन्छ?
संतहरु देखि चमत्कार उद्धरण
बाल विवाह: तथ्य, कारण र परिणाम
बाह्र कोलोन को चार्ट
OEM ले के गर्छ?
जेम्स ओलरथोरप जैव
'ल्याटिन संगीत' को परिभाषा
बुधबारको मिति कसरी निर्धारण गरिन्छ?
संस्कृति द्वारा देवता र देवीहरूको सूची
विशिष्ट आकाशगंगा: द वर्ल्ड ओडिबल्स
आत्मा सम्झौता र पूर्व जन्म जीवन योजना
ब्राघिड, आयरल्यान्डको दिदी देवी
हिस्टोग्राम के हो?
शिक्षामा आमाबाबुको संलग्नता बढाउन प्रभावशाली रणनीतिहरु
अमेरिकी सीनेट को तल मा दासत्व मा हिंसा